जाडो मौसममा मुटुका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने सात कुरा
मंगलवार, फागुन ४, २०७२ साल
१. विहानको चिसोमा मर्निङ वाक नगरौँ : हिजो आज विहानको मौसम अत्यधिक चिसो हुने भएकोले मर्निङ वाकमा सकभर कोही पनि ननिस्किएको राम्रो । अझ मुटुका विरामी त चिसोमा निस्कनै हुँदैन ।..
भूकम्पबाट डराएकालाई निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श
सोमबार, फागुन ३, २०७२ साल
काठमाडौँ, २१ वैशाख । भूकम्पपछि डराइरहनेका लागि परामर्श र सल्लाह दिने उद्देश्यले मनोसामाजिक सहयोग सुरु गरिने भएको छ । भावनात्मक प्राथमिक उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहयोग कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको..
परामर्श संयन्त्र स्थापना हुँदै
काठमाडाँै, १८ कात्तिक । नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीच राजनीतिक, कूटनीतिक, विकास सहायता तथा पारस्परिक चासोका विषयमा छलफल गर्न दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ..
चिसो पानीले नुहाउनुका फाइदा
मंगलवार, माघ १९, २०७२ साल
चिसो पानीले तपाईको दिमागलाई पनि ठन्डा बनाउँछ । त्यस्तै तपाईको शरिरमा रहेको युरिक एशिडलाई चलायमान बनाउँदै विभिन्न चोट–पटकबाट लागेका खतमा बस्ने ब्याक्टेरियालाई हटाउन समेत भूमिका खेल्छ । यसबाहेक पनि चिसो..
किन फुल्छ कपाल ?
कपाल किन फुल्छ भन्नु र कसरी कपालको रंग बदलिन्छ भन्नु एउटै हो । त्यसैले सर्वप्रथम हामीले रंगको वैज्ञानिकता बुझ्न आवश्यक हुन्छ । रंग अथवा कलर टिन्ट, सेड र टोन नामक ती..